ဝယ်ယူသူတိုင်း စိတ်တိုင်းကျစေမယ့် Distinct Trading Co.,Ltd.
Distinct Trading Co.,Ltd. သည် USA, UK နှင့် Japan နိုင်ငံထုတ် မော်တော်ယာဉ်များအား ဝယ်ယူသူများ စိတ်တိုင်းကျ မှာယူတင်သွင်းပေးနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်.။ ပြည်ပမှ ကားများ မှာယူတင်သွင်းပေးရုံမကဘဲ နိုင်ငံတော်အခွန် တွက်ချက်ပေးခြင်း၊ ကားဂရိတ်ခွဲ၊ အင်ဂျင်ပါဝါခွဲများအကြောင်း ရှင်းပြပေးခြင်း၊ မိမိအသုံးပြုလိုသည့် တန်ဖိုးအလိုက် သင့်လျော်မည့်ကားအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်အကြံပြုပေးခြင်းတို့ကိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်.။
အထက်ပါဝန်ဆောင်မှုများအပြင် သွင်းကုန်လိုင်စင် (ပါမစ်)လျှောက်ထားခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းမှကားထုတ်ပေးခြင်း နှင့် က.ည.န ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်.။ ဈေးနှုန်းသင့်တင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်သည့်အပြင် ဝယ်ယူသူတို့ အဆင်ပြေအောင် စတင်မှာယူသည့်အချိန်မှ ကားအုံနာစာအုပ်လက်ဝယ်ရောက်ရှိသည်အထိ စလယ်ဆုံး ဝယ်သူစိတ်တိုင်းကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေသောကြောင့် အောင်မြင်မှုရရှိနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်.။
ကား Showroom များနှင့် တဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချလိုသူများအတွက်လည်း အထူးနှုန်းထားများဖြင့် မှာယူတင်သွင်းပေးနေပါသည်.။ Distinct Trading Co.,Ltd. နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လိုပါက အမှတ် (၁) ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်းနံပါတ် ဝ၉-၃၆ဝ-၅၁-၂၂၂၊ ဝ၉-၃၆ဝ-၅၁-၄၄၄၊ ဝ၉-၂၅၄-၆၃၇-၆၃၇၊ ဝ၉-၂၅၄-၆၃၈-၆၃၈၊ ဝ၉-၂၅၄-၆၃၉-၆၃၉၊ သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.။ အင်တာနက်မှတဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လိုပါက distincttrading@gmail.com, www.distinct-trading.com, www.facebook.com/DistinctTrading သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.။
အာဆီယံစံနှုန်း ကုန်နှင့်ယာဉ်တန်ချိန် သတ်မှတ်ချက် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်မည်
2015 မှာ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားရမယ့် ကား (၁ဝ)စီး - အပိုင်း (၁)